The KaungHtet, Author at Shop
Shop > Articles by: The KaungHtet
Community, Others, Social Causes, Technology
TECH WEEK 2022028
The KaungHtet June 23, 2022 6:42 am June 23, 2022
Are you ready to experience Superior & Sophisticated Technologies?Up-to-70% OFF TECH-mazingly surprised Deals & Discounts? Well, well, well, Keep Calm …
Buying Guides, Community, Lifestyle, Lifestyle, Others, Technology
အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ018
The KaungHtet June 21, 2022 8:36 am June 22, 2022
အချိန်နဲ့အမျှ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အဖက်ဖက်မှ အွန်လိုင်းစနစ်သို့ကူးပြောင်းလာတဲ့ကာလမှာ အရောင်း၊ အဝယ်လုပ်တဲ့ စျေးကွက်ကြီးတစ်ခုလည်း အွန်လိုင်းပေါ် သို့ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်အသွင်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းကျိုးများစွာလည်းဖြစ်ပေါ်သလို ဆိုးကျိုး (Side Effects) များလည်းရှိနေတတ်ဟာ ဓမ္မတာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာ …
Community, Lifestyle, Lifestyle, Others
ဉာဏ်အကောင်းဆုံး ကြောင် (၇) မျိုး043
The KaungHtet June 18, 2022 2:30 pm June 20, 2022
မြောင်ချစ်သူတို့ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ? ရှိပါလျှင် လက်ညှိုးထောင် ဒီတစ်ပတ် Shop Life Blog ကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဉာဏ်အကောင်းဆုံး ကြောင် (၇) မျိုးကို မြောင်ချစ်သူများအတွက် ဗဟုသုတရဖွယ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်! မစခင်မှာ.. ကြောင်နှင့် အိမ်မွေး …
Community, Lifestyle, Lifestyle
Same Words, Different Meanings028
The KaungHtet June 16, 2022 11:32 am June 20, 2022
ကျွန်တော်တို့နေ့စဥ်သုံးနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်‌ဝေါဟာရတွေထဲမှာ စကားလုံးတွေတူပြီး အဓိပွာယ်ကွဲပြားနေတဲ့ စာလုံးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သတိထားမိရဲ့လား? Shop Life Blog မှ “Same Words, Different Meanings” – စကားလုံးတူပြီး အဓိပွာယ်မတူတဲ့ နေ့စဥ်သုံး အင်္ဂလိပ်‌ဝေါဟာရ (၂၁) …
Monsoon Fashion Lookbook0535
The KaungHtet June 10, 2022 9:52 am June 10, 2022
မိုးတွင်းဖက်ရှင်ရွေးချယ်တဲ့အခါ ခေါင်းစားနေပြီဆိုရင် စိတ်မပူပါနဲ့နော်။ Shop App ကနေ ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာ အလုပ်ခွင်သွားသူများအစ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်ရသူတွေနဲ့ ဟိုနားဒီနားသွားသည့်တိုင်အောင် ဖက်ရှင်ကျနစွာဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် တွဲစပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ အခုပဲ Shop App နဲ့အတူ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်! …
Community, Lifestyle, Lifestyle, Social Causes, Travel
မိုးရာသီမှာ ပုဂံသွားလည်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၁၀) မျိုး056
The KaungHtet June 8, 2022 10:58 am June 20, 2022
သင်ဟာ မိုးနဲ့ယဥ်ပါးတဲ့ ခရီးသွားလည်ပတ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဇွန်မှ စက်တင်ဘာလများဟာ အကောင်းဆုံးအခါသမယပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ “Big 4” လို့ ပြောစမှတ်ပြုရတဲ့ အထင်ကရ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ အင်းလေးကန်နဲ့ ပုဂံရှေးဟောင်းနယ်ပယ်အပါအဝင် တခြားသောဒေသများဟာ မိုးတွင်းဆိုရင် သွားလာသူနည်းပါးတာကြောင့် ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအားထားရသူများအတွက် …
Beauty, Beauty, Community, Fashion, Fashion, Life Hacks, Lifestyle, Lifestyle, Social Causes, Technology
မိုးရာသီမှာ အလုပ်ခွင်သို့ ဆောင်ယူသင့်သည့် ပစ္စည်း (၇) မျိုး0233
The KaungHtet June 3, 2022 9:19 am June 9, 2022
မိုးတွင်းဆို သွားရလာရတာ ကရိကထများလိုက်တာနော်။ မိုးရာသီမှာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရတဲ့သူတွေဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။ အလုပ်သွားနေချိန် လမ်းမှာမိုးမိသွားရင် တစ်နေကုန် ရုံး၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်မပြေဖြစ်ပါလေ‌ရော။ ဒီလိုပြသနာတွေဖြေရှင်းဖို့ မိုးရာသီမှာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေဆောင်ယူရမလဲဆိုတာ Shop App မှ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ …
မိုးတွင်းမှာ Strawberry Yogurt Soju သောက်ရင်း Chill မယ်065
The KaungHtet June 2, 2022 11:02 am June 3, 2022
[18+] အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများအတွက်သာ။ မိုးတွင်းအေးအေးလေးမှာ ရင်ထဲနွေးစေဖို့ ယောက္ခမမြေကိုလွမ်းရင်း စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဥ်ဆိုဂျူး အေးအေးလေးဖျော်သောက်နည်းကို လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်! ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ – စပျစ်ဆိုဂျူးတစ်လုံး နှစ်သက်ရာထုတ်ကုန်နဲ့ အရသာကို ရွေးချွယ်နိုင်ပါတယ်။ Shop Team ကတော့ ပစ္စည်းမှန်စျေးတန်ပြီး …
စာပေဝါသနာအိုးလေးများကိုပြောပြပေးမယ့် မေလရဲ့အကောင်းဆုံး စာအုပ် (၁၀) အကြောင်း0184
The KaungHtet May 26, 2022 8:22 am June 2, 2022
မိုးအေးအေးလေးမှာ ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့ အချိန်တွေကို စာပေများနဲ့ တန်ဖိုးရှိရှိကုန်ဆုံးချင်သူများအတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် မေလရဲ့ စာအုပ် (၁၀) အုပ်အကြောင်းကို Shop App နဲ့အတူ SAFARI BOOK Official Store မှ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Healthy …
Lifestyle, Lifestyle, Technology
စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဆရာနှစ် ၂ဆူရဲ့ အားပြိုင်မှု0257
The KaungHtet May 25, 2022 7:42 am May 25, 2022
စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဆရာနှစ် ၂ဆူရဲ့ အားပြိုင်မှု Samsung ရဲ့ Innovative နည်းပညာနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Galaxy S22 နဲ့ iPhone ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် နောက်ဆုံးပေါ် 13 series ရဲ့ …